Uninzi lwababameli bezesondo ezifanelekileyo bayakholelwa ukuba xa umntu ehlela imifanekiso yesikhwele okanye yonke into ibonisa oko, ngoko uyayithanda. Kodwa ngokwenene yonke into iyahluke. Xa intloneli ivelisa intliziyo kunye nomfazi, izizathu zesikhwele zilula - wayesele evakalelwa yintombi kwaye uyesaba ukulahlekelwa yiyo. Kodwa ngamanye amaxesha ukubonakaliswa komona wesilisa kubonakali, kodwa kunoko umntu uhamba ngokushukuma komsindo.
Ukuhlala phantsi kophahla olulodwa nomntu onjalo akuyona into elula kunokuba ngumntu onobubele obunomzimba, ohlala njalo ehlala apho, ulungelelanisa konke okulandelayo kuye. Ngendlela, ngokwemanani, malunga nokuqhawula umtshato, kwenzeka ngenxa yomona ofihliweyo kunye nokungaqondi kakuhle kwabesifazane. Ngoko ke, ukuphepha ingxaki, kuyimfuneko, okokuqala, ukuba uqonde xa umntu ekhwele kwaye ngoncedo lwale ukuze afune ukuba inkwenkwe yakho inomona okanye akayi kubona naziphi na izizathu zezi.
Iimbangela zokugqithiswa komona wesilisa
Okokuqala, kufuneka ukuba uzibonele ukuba uyayikhupha umqhubi womona. Sinikela ngezizathu eziqhelekileyo ezibangela umona kubantu:
Ukuphulwa kwekratshi. Lapha, into yokuqala efika engqondweni kukuba ininzi yamadoda ngokwesini esomeleleyo isaba ukuphonswa ngaphandle ngenxa yendoda ethile. Inzondelelo yalolu hlobo ludla ukuhlala lilindelwe iindaba ezimbi kwaye yonke imihla bazama ukuyifumana kumfazi nawuphi na ubungqina okanye ubungqina bokungcatsha kwakhe.
Bonke abanikazi bendoda okanye izandla zam abazichaphazeli. Indoda ngumnini umnqweno, njengomthetho, akafuni ukwabelana ngqalelo kwintombi yakhe nomnye umntu. Kungenxa yesi sizathu, ukuba ubona ukubonakaliswa kobugwenxa bakho kwamanye amadoda, ababenxibelelana nabo, khawuleza bayeke le ngongoma kwintetho enomdla kakhulu kwaye niphendule ingqalelo. Ngoko uya kukwazi ukupholisa umgudu wakhe kwaye ugweme ukungqubana.
Umbono wesihlwele ngumthetho. Kwaye yesithathu isizathu esibangeleyo, esibangela ukuba umona ube ngamadoda - ukwesaba okwesaba abantu, ukuhleka kwe-chinabolists. Kule meko, le ndoda ngokwayo iyakwazi ukuqala ngokukhawuleza ukufumana ubudlelwane kunye nenjongo yokufundisa umfazi kwaye ikholelwa ukuba ulungile.
Ungaziqonda njani xa umntu ezaliswa ngaphakathi ngaphakathi enomona wesikhwele ?
Ngendlela, akuwona onke amalungu esondo esomeleleyo avulekile ngokukhululekile, kuba kukho abantu abafihlakeleyo kwaye babonise umona wabo ngendlela ehlukileyo. Iifom ezibalaseleyo zokubonakaliswa kwekhwele lamadoda elifihliweyo, njengomthetho, zimbini. Ingundoqo yeyokuqala kukuba indoda yakho elungileyo isoloko iqalisa ukukuphazamisa imibuzo ngemibuzo kwaye ibonise isimo sengqondo esichaphazelekayo ngokubuya kwakho ekhaya emva komsebenzi, uqala ukucaphukisa iintlanganiso zakho kunye neentombi zakhe, njl. Ngelo xesha, akunakwenzeka ukuba wenze iimpazamo, umntu wakho uya kukhangela! Ifomu lesibini lomona ngumntu okhubazeka ngumntu. Apha, i-chevalier iziphatha njengomntwana: ukudlala ngokuthula, mozhetotkazyvatsya ukusuka ekutya kunye nakwimzuzwana ukuba ushiye indlu. Kule meko, kunzima ukubona kwangaphambili imiphumo yendlela yokuziphatha, ngoko ke, kuyimfuneko ukuqonda ngexesha xa uthembekileyo wakho enomona aze athathe isenzo, echaza isizathu.
Ziziphi iimpawu, ukuba unomona
Ukuqonda malunga nomona ukusuka kwicala lomthandayo kunzima kakhulu, kubhala ingqalelo kwizinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo zangaphambili kunye nezinto ezivela kubomi bemihla ngemihla yobomi bemihla ngemihla. Umzekelo, qaphela ukuba kaninzi kangakanani ukuthembeka kwakho okufunayo ekusithekeni kuwe okanye ngaphantsi kweyiphi enye into ecacileyo i-SMS yakho kwifowuni, i-imeyile okanye iprofayili yakho kwinethiwekhi yentlalo. Yonke into eyenziwe ngokucacileyo, kuba umntu (okanye ngaphandle kwesizathu) unokusola kwaye uzama ukufumana i-snitch eya kuphendula imibuzo yakhe. Ukuba uyaphawula oku, qiniseka ukuthetha kunye nekwenkwenkwe kwaye wenze ngokukhawuleza, ngenxa yokuba izikhalazo ezingenasiseko zingakhula zibe yi-paranoia.
Esinye isignali esithetha ukuba umhlobo wakho unomona, unokuba nomnqweno wakhe wokuhamba nawe kwiifilimu (nangona kunjalo ngaphambili ukuba wenqaba ukwenza olo hlobo). Ngendlela, lo mnqweno uyazibonakalisa ngokukhawuleza xa uphuma kunye neentombi zakho okanye osebenza nabo emsebenzini. Oku kunokuphikiswa ngento yokuba wayekhe wagqiba ekubeni ahambe nawe kanye, kuba ufuna ukuphumla kwisiqhelo kwindawo entsha. Kuyafana nokuvakatyelela kwiindwendwe okanye kwimidlalo, njl. Ngendlela, nokuba yinto eqhelekileyo, kodwa inqwenela ukukunqanda, ingaba ngumqondiso weshwele.
Kukho amaxesha apho umona wobukhwele ubonakala ngendlela ekhethekileyo. Oku kukhethekileyo kulabo bantu bathanda ukukhangela kuzo zonke iinkcukacha ngeendlela ezikhohlakeleyo "ngendlela engqondweni ngayo". Umzekelo, ngexesha lesidlo sakusasa, intanda yakho (njengokuba ngengozi) uthetha malunga nomntu omaziyo kunye nokudlulayo, ngeli xesha le ngxoxo, umbuzo wesicwangciso "unokugqithisa" kodwa ubonane ... Kakade, oku akusikho isibonakaliso somona, kodwa ukuba intetho enjalo ngemini ukutshiza amaxesha ambalwa - uqinisekile ukuba nomona.
Esinye isibonakaliso somona wesilisa sithathwa njengesimo sakhe sengqondo kwisinye sezihlobo zakho. Ngokomzekelo, uhamba ngaphantsi kwesitalato, udibene nomhlobo wakho, ongeyibonanga ixesha elide. Kakade. Intlanganiso iya kuba neendleko ngaphandle kokubambisana kunye nokubanga esitini. Emva koko incoko ekulindelwe ixesha elide iqala, kwaye umqhubi wakho usele. Kananjalo akaphosoli ithuba lokuziqhelanisa nomhlobo wakho kunye nayo yonke indlela enokuzama ukukhangela umdla wakhe. Kuyafana okufanayo, nangona ubone umhlobo, obona ngokuqhelekileyo. Iqabane lakho lizama ukutsala umdla wakho okanye uqale ukuthetha nomtyholi. Ngelinye igama, ukwenza nantoni na eya kukuthintela wena nomhlobo wakho ukuba ungabi yedwa. Kungakhathaliseki ukuba uthetha ntoni, ilizwe lithintela umthandayo. Ngoko zama ukumbonisa ukuba uthetha kuwe kuninzi kwamadoda.
Yaye into yokugqibela, ukuba i-chevalier yakho inomona kuwe-makenze oko, kuba bonke abanikazi bendoda kunye nomona wesikhwele (okwenene, ngokulinganayo) yinxalenye engabonakaliyo yobomi babo! Into ephambili akuyi kuhamba kude, ukuqaphela ukunganeliseki kwakhe, kwaye ungaguquli intonga, kuba nawuphi umonde uphela!
Ukucacisa iingcinga eziphathelele umtshato
Ukuvuma ngothando kumntu othandekayo
Imithetho yokwahlukana: njani ukuyenza intlungu?
Iindaba malunga nothando notitshala
Izibango zothando ngokude
Ukulondolozwa kwempilo yokuzala
U-Ivan Urgant wanyamekela ukomeleza i-lactation eKsenia Sobchak
Imidlalo yokuhambisa abantwana kunye nabantu abadala
Bagels nge pumpkin
Ukukhulelwa nokuqeqeshwa koqeqesho
I-Horoscope ye-Lion-Woman ngo-2016-uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Ikhumba elihle ekhaya
I-ABC yokuphila kakuhle kwimpilo yabantwana
Indlela yokufumana nokuhambisa iindwendwe
Ukuhleka kweso kweso